Nekuvandudzwa kwematrasi, matiresi nyowani nyowani nyowani inowoneka, iri kufamba senge sarudzo kune avo vanotarisira kuve neyese yekurangarira furo uye mamatiresi emukati. Chaizvoizvo iyo yakasanganiswa matiresi chinhu chemukati chemukati chakatakurwa nefoshoro yepamhepo. Mbeu dzakauchikwa sarudzo yakanaka kune vanhu vanoda kunakidzwa nemusanganiswa wetsime rutsigiro asi vanoomerera pahunhu hwendangariro furo.
Chitubu uye ndangariro furo remasanganiswa mamatiresi
Kune akawanda marudzi akasiyana ematiresi pamusika, furo, chitubu, matiresi yemasanganiswa. Asi matsva matsva matekinoroji ari kuburitsa gore rega, unoziva sei kuti ndeupi arikuita zvaunoda, kunge nyoro, yakasimba, kana furo yekurangarira, smartphone-inogoneswa? Izvo zvakawanda zvingasarudzwa zvinogona kuita kuti unzwe uchinetseka. Zvisinei, izvo zvaunonyatso chengeta aya matipi: Zvinokubatsira here kurara zvirinani? Mune rimwe shoko, matiresi ari pamusika anogona kunyatso kuverengerwa senge chitubu, furo, uye chemasanganiswa. Imwe yeaya marudzi ematiresi ane zvimwe zvakasarudzika zvaunofanira kuziva usati waita kutenga kwako kukuru kukuru.
Matiresi yematsutso ndiwo chaiwo machira anoshandiswa nevabereki vako zvakanyanya. Matiresi efuro ane akawanda marudzi, ivo vese vanoshanda mukuwedzera kunaka kwekurara, kupa rubatsiro rwepamusoro, uye nekugadzirisa kunonyanyisa kupora panguva yekurara. Nekuvandudzwa kwematrasi, matiresi nyowani nyowani nyowani inowoneka, iri kufamba senge sarudzo kune avo vanotarisira kuve neyese yekurangarira furo uye mamatiresi emukati. Chaizvoizvo iyo yakasanganiswa matiresi chinhu chemukati chemukati chakatakurwa nefoshoro yepamhepo. Mbeu dzakauchikwa sarudzo yakanaka kune vanhu vanoda kunakidzwa nemusanganiswa wetsime rutsigiro asi vanoomerera pahunhu hwendangariro furo.
Chitubu uye ndangariro furo hybrid metiresi 2.5cm inotonhorera gel memory memory foam, kupisa kwakaderera nejekiseni rechitonhorera chinhu. Φ2.0mm 18cm yekuvhunduka-chiratidzo muhomwe chitubu inopa isina kuvhiringidzwa kurara chiitiko. Matress nebhokisi mutsago pamusoro uye mufashoni musiyano ruvara pombi dhizaini.
Type: Hotel Suite; Imba yehotera; Midziyo yemubhedha
Chinyorwa: Chitubu; Mucheka; Ndangariro Foam
Chitarisiko: Dzazvino; Maitiro eEuropean
Chigadzirwa zita: Chitubu uye ndangariro furo remasanganiswa mamatiresi
Model Nhamba: #M-SA01-03
Basa: Mumbure yekurara; Matiresi yemasanganiswa
Dimension(cm): Kuroora kana kuroorwa; Yakazara; Mambokadzi; Mambo; Yakasarudzika Saizi
Kuisa pack(cm): Base pahukuru
Kurera: Base pahukuru
A: Hongu, isu tine akawanda mavara kusarudza kubva kwakasiyana michina senge yepamusoro gorosi yeganda, PVC, UNOGONA, kana machira.
Q: Ndeupi mazwi ekubhadhara?
A: Garandi yemasofa ndeye 2 makore ezvakaumbwa zvemukati, 1 gore reganda rekunze; Matress ndeye 10 makore ezvinyorwa zvemukati.